पत्याउनु हुन्छ ? बिहेको अघिल्लो रा’त यस्तो कुरा सम्म सोच्ने गर्छन युवतिहरु – – Life Nepali
पत्याउनु हुन्छ ? बिहेको अघिल्लो रा’त यस्तो कुरा सम्म सोच्ने गर्छन युवतिहरु –
काठमाडौं – विवाहको अघिल्लो रात युवतीहरूको मनमा खेल्ने कुराहरूबारे तपाइले अनुमान गर्नुभएको छ ? युवतीहरूमा अघिल्लो रात विभिन्न कुराहरू खेल्न सक्छन् । जसकारण उनीहरू यस विषयमा केही चि’न्तित पनि हुन्छन् । ब’न्धनमा बाँ’धिएपछिको पहिलो रात के होला भन्ने कुराहरूमा युवतीहरू अ’ल्झिन सक्छन् । यसकारण मु’टुको ध’ड्कन पनि बढ्न सक्छ । हेर्नुहोस् कस्ता कुराहरू खेल्दा रहेछन् युवतीहरूको मनमा :
विहेलाई लिएर युवतीको मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्नु स्वभाविक हो । मानिसलाई लाग्न सक्छ युवती विहेपछि ह’निमुनको बारेमा सोच्छन् । तर, यस्तो हुँदैन । उनीहरुको मनमा के आफू विहे गरेर ठूलो जिम्मेवारी लिने भइसकेछु र ? के विहेका लागि आमा बाबुसंग समय माग्नुपर्छ ? लगायतका प्रश्नहरु उ’ब्जिन्छन् ।
पोइली घरमा मलाई स’हजै अपनाउँछन् ?
युवतीलाई विहे हुनुभन्दा एक रा’त पहिलेनै के म्रले पोइली घरमा माइती घरको जस्तै व्यवहार पाउँछु ? के मलाई मनैदेखि अपनाउँछन् ? त्यो भन्दा बढी युवती हुनेवाला सासुआमाको बारेमा सो’च्न गर्छन् ।
युवती एकरात पहिले आफ्नो हुनेवाला श्रीमानले जीवनभर आफूलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन भनेर पनि सोच्ने गर्छन् । यौ’न स’म्पर्कलाई कसरी न’कार्ने : विहेपछि श्रीमान श्रीमतीबी’च यौ’न स’म्बन्ध हुनु स्वभाविक हो । तर, युवती विहेको अघिल्लो दिन नै यसबारेमा चि’न्तित हुने गर्छन् । युवती पहिलो रातमा आफ्नो हुनेवाला श्रीमानसंगको यौ’न स’म्पर्क कसरी रो’क्न सक्छु र भन्ने बारेमा सोच्ने गर्छन् ।
Previous भाग्यशाली महिलाको यी अं’गहरु ठूला हुन्छन् ! जानी राखौं ।
Next यी हुन पानी भन्दा से’क्स सस्तो भएका संसारका ५ देशहरु –